Anabolika Steroids mpamatsy varotra poids - AASraw poids
/ Products / Anabolika Steroids
Anabolic steroids, steroids anabolic-androgenic (AAS), are variations of the testosterone male hormonal sex hormone. Ny fepetra tsara ho an'ireo fitambarana ireo dia ny steroids anabolic-androgenic. Ny "Anabolic" dia manondro ny fanorenana hozatra, ary ny "androgenic" dia manondro ny fitomboan'ny lahy sy ny vavy. Ny anarana iombonana ho an'ny steroid Anabolic poids dia Gear, Juice, Roids, ary Stackers.
Misy olona manararaotra ny fihinanana steroids Anabolic mba hanatsarana ny endriny.
Ny dokotera mpikaroka momba ny fahasalamana dia afaka manolotra hentitra amin'ny fitsaboana ho an'ny hormonina, toy ny faharetan'ny fahamaotinana. Ny steroïda koa dia afaka manasitrana aretina izay mitarika hozatra, toy ny homamiadana sy ny SIDA. Fa ny atleta sasany sy ny bakteria dia manararaotra ireo zava-mahadomelina ireo mba hanatsarana ny fahombiazany na hanatsara ny endriny.
Ny loza ara-pahasalamana dia azo atao amin'ny fampiasana maharitra na ny dosisin'ny AAS. Ireo vokatra ireo dia ahitana fiovana mahatsiravina eo amin'ny sehatry ny kolesterola (lopoproteine ​​miha-dity miharatsy ary mihena ny lopoproteine ​​avo lenta), akne, tosi-drà avo, fahavoazana ny aty (indrindra indrindra amin'ny AAS), ary fiovana mampidi-doza eo amin'ny rafitry ny vala am-po. Ny fepetra momba ny tsy fitoviana hormona toy ny gynecomastia sy ny fihenan'ny fiterahana dia mety ho vokatry ny AAS ihany koa. Amin'ny vehivavy sy ny zaza, ny AAS dia mety hiteraka fanavakavahana.
Ny fampiasana Ergogenic ho an'ny AAS amin'ny fanatanjahantena, ny fifaninanana ary ny fambolena dia ny fampivoarana ny zava-mahadomelina mampiady hevitra noho ny voka-dratsiny ary ny mety hisian'ny tombontsoa tsy ara-drariny amin'ny fifaninanana ara-batana. Ny fampiasana azy dia antsoina hoe doping ary voarara amin'ny vatana lehibe indrindra amin'ny fanatanjahan-tena. Nandritra ny taona maro, ny AAS dia ny ankamaroan'ny doping ao amin'ny laboratoara IOC. Any amin'ny firenena izay misy fitaovam-piadiana ny AAS, matetika dia misy tsena mainty izay ahitana mpivarotra amoron-dalana, famokarana an-tsokosoko na dipoavatra sandoka.
Ny mpampiasa steroid indrindra dia tsy atleta. Teo anelanelan'ny 1 tapitrisa sy ny olona 3 tapitrisa (1% ny mponina) noheverina fa nampiasa AAS tany Etazonia. Ny fanadihadiana natao tany Etazonia dia nampiseho fa ny mpampiasa AAS dia manana ny maha-lahy na maha-lahy na maha-lahy na maha-lahy na maha-lahy na antitra azy miaraka amina taona iray momba ny 25 izay tsy mpanao hatsarana sy tsy atleta tsy ampiasaina ary mampiasa ny zava-mahadomelina ho an'ny tanjona kosmetika. "Anisan'ireo 12- ho an'ny zazalahy 17-taona, ny fampiasana karazana steroïde sy fihisoana toy izany dia nitsambikina 25 isan-jato tamin'ny 1999 ka 2000, ary ny 20 isan-jato dia milaza fa mampiasa azy ireo ho toy ny fanatanjahantena fa tsy fanatanjahantena, fandinihana nataon'ny Blue Cross Blue Shield mpiantoka." (Eisenhauer) Ny fandalinana iray hafa dia nahatsikaritra fa ny fampiasana tsy ara-pahasalaman'ny AAS eo amin'ny mpianatra amin'ny kolejy dia latsaky ny 1%. Araka ny fanadihadiana vao haingana, 78.4% ny mpampiasa steroid dia tsy mpividy birao sy tsy atleta, raha ny momba ny 13% dia nitatitra fa tsy azo antoka ny fampidiran-tsakafo toy ny fananganana ny fanjaitra, ny fizarana ny fanjaitra, ary ny fizarana ny tavoahangy multidose, na dia ny fandalinana 2007 aza dia nahita fa ny fizarana ny fanjaitra tena tsy mahazatra amin'ny olona mampiasa ny AAS ho an'ny tanjona tsy fitsaboana, latsaky ny 1%. Ny fikarohana 2007 iray hafa dia nahatsikaritra fa ny 74% amin'ireo mpampiasa AAS tsy mpitsabo dia nahazo diplaoma ambony ambany ary maro kokoa no nahavita ny oniversite ary vitsy no tsy nahavita ny sekoly ambaratonga ambony noho ny fanantenana avy amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ny fandinihana iray ihany dia nahatsikaritra fa ny olona mampiasa ny AAS ho an'ny tanjona tsy fitsaboana dia nahitana tahan'ny asa ambony kokoa sy fidiram-bola ambony kokoa noho ny mponina ankapobeny. Ny mpampiasa AAS dia mandinika ny zava-mahadomelina ataon'izy ireo mihoatra noho ny mpampiasa hafa mifehy ny vatana; Na izany aza, ireo loharano lehibe notsidihan'ireo mpampiasa steroid dia ahitana namana, boky tsy ara-pitsaboana, sehatra fifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto, blaogy, ary gazety ara-pahasalamana, izay afaka manome vaovao mampiahiahy na tsy marina.
Ahoana ny fanararaotan'ny olona Anabolic steroids?
Ireo olona izay mampiasa herisetra amin'ny steroide Anabolic dia mamono azy matetika na mametraka azy ao amin'ny hozatra. Ireo doses ireo dia mety 10 hatramin'ny 100 avo indrindra noho ny doses prescribed to treat health conditions. Ny steroïda koa dia ampiharina amin'ny hoditra toy ny crème, gila, na patch.
Ny atleta sasany sy ny hafa izay mihevitra ny steroïde dia mino fa afaka misoroka ny vokatra tsy ilaina izy ireo na mampitombo ny vokatra azo avy amin'ny zava-mahadomelina amin'ny alalan'ny fampidirana azy ireo amin'ny fomba izay ahitana:
Dingana mandritra ny bisikileta mandritra ny fotoana voafetra, mijanona mandritra ny fotoana fohy, ary manomboka indray
Mampifamihina-manambatra karazana steroïde roa na maromaro
piramida - mampitombo tsikelikely ny doka na ny habetsaky ny fanararaotana, manatratra ny tampony, ary avy eo mihena tsikelikely
Anabolic-androgenic steroids (AAS) dia dikan-teny mampiavaka ny testosterone voan'ny hormone ary manana fanafody ara-dalàna. Raha araka ny lalàna sy ny fanaraha-maso ataon'ny mpitsabo iray, dia heverina ho toy ny fitsaboana azo antoka sy fitsaboana ny fanafody steroide Anabolic.
Na izany aza, ny ankamaroan'ny fampiasana an'ireny zava-mahadomelina ireny dia anisan'ny mpanao biriky sy atleta mba hanamafisana orina ny tanjaky ny hozany. Ny fampiasana herisetra mafy dia mety miteraka voka-dratsin'ny fahasalamana mety henjana sy indraindray, toy ny aretim-po, fihokoana, fahaketrahana sy fihetsika mahery vaika.
Andramo ny fampiasana ny AAS amin'ny orinasa mety hiantsoana ny maka tahaka ny kalitaon'ny fitaovam-piofanana AAS, mahandro ny takelaka / kapsule AAS na ny solika nateraky ny fepetra henjana dia hitondra ny fahasalamanao tsy mety.
Maneho 1-8 ny 46 vokatra
Dienolone vovoka (6218-29-7)
Mibolerone vovoka (3704-9-4)
Trenbolone Acetate (Tren ace) poeta